Maxaabiis kasoo jeedda Galmudug oo muqdisho loo qaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaabiis ku eedeysan fal burcad-badeednimo oo ku xirneed xabiga dhexe ee magaalada Garowe xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho.
GAROWE, Soomaaliya - Maxaabiis ku eedeysan fal burcad-badeednimo oo ku xirneed xabiga dhexe ee magaalada Garowe xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho.
Soo wareejinta maxaabiistan ayaa qaadatay muddo dheer, waxayna qeyb ka ahaayeen maxaabiistan rag lagu soo qabtay fal burcad-badeednimo kuwaasoo dhalasho ahaan kasoo kala jeeda deegaanada Puntland iyo Galmudug, ciidamada Jasiiradda Siishalis ayaa gacanta ku dhigay kooxdan waxaana lagu xakumay xabsi kaddib markii lagu helay caddeymo muujinaya in ay burcad-badeed ahaayeen.
Maamulka Puntland oo xiriir la sameeyay Jasiiradda Siishalis ayaa waxay ku guuleysteen in maxaabiistaasi lagu soo wareejiyo maamulka Puntland si ay halkaasi ugu dhammeystaan muddada xabsiga ee lagu xukamay. Intaa kaddib maamulka Galmudug ayaa billaabay in uu dalbado in lagu soo wareejiyo maxaabiista udhalatay Galmudug balse maamulka ay dariska yihiin ee Puntland ayaa diiday dalabka kaga yimid dhiggooda Galmudug.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka dalbatay maamulka Puntland in loo soo wareejiyo maxaabiista, sidaas ayeyna maamulka Puntland ku aqbaleen, maanta ayaana loo wareejiyay xabsiga dhexe ee Xamar, dadaalka ugu badan howshani waxaa bixiyay wasiirkii hore ee dakadaha Galmudug Qalabxoor.